मेरो पृष्ठपैंकलाई ब्याकलिङ्कको साथमा उल्टाउनको लागि कुनै पनि अन्तिम दृष्टिकोण छ?
त्यहाँ धेरै वर्तमान वैध रणनीतिहरू छन् जुन सम्भवतः प्रत्येक वेबसाइटको वा ब्याकलिङ्कहरूसँगको ब्लगको पेजरीङ्क उठाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।. र हामीले सुरु गर्नु अघि, चलो यसलाई सामना गरौं - तपाईं शाब्दिक रूपमा तपाइँको अवस्थित PageRank लाई ब्याकलिङ्कको साथ, कुनै पनि ट्रिक वा राम्रो तरिकाले देख्न सकिने साथमा "आकाशबत्ती" गर्न सक्नुहुन्न।. निस्सन्देह, तपाईंको ब्याकलिङ्क प्रोफाइल शीर्ष महत्वको मुख्य कारकहरू बीचमा रहेको छ जब यो एक सकृय प्रभाव हुन्छ जुन अन्तमा तपाईको वेबसाइटको पृष्ठ निर्धारण निर्धारण गर्दछ। - temporizzatori meccanici produttori. Google जस्तै प्रमुख खोज इञ्जिनहरू द्वारा विचार गरिएका अन्य कारकहरू निम्न हुन्: आफैलाई, मुख्य लक्ष्यशब्दहरू, अद्वितीय गुणस्तर सामग्री, र अन्य वेबसाइट गुणहरू जुन एसईओमा कम निर्णायक हुन्छ।. बिन्दुमा फिर्ता आउँदैछ - यो तपाईंको पेजरैंकलाई ब्याकलिङ्कको साथमा सुधार गर्न केवल असम्भव छ. तर कार्य अझै पनि प्राप्त योग्य छ, किनभने तपाइँ तयार हुनुहुन्छ र तपाईंको समग्र दीर्घकालीन रणनीतिमा धैर्य संग काम गर्न तयार छ. तल इमारत लिङ्क गर्न सम्भावना सबै भन्दा राम्रो तरिका हो जुन Google मा सम्भावित रूपमा तपाईंको उच्च पृष्ठ निर्धारणमा योगदान गर्न सकिन्छ.
र मलाई तपाईंलाई सावधानीको अन्तिम शब्द दिन दिनुहोस् - पृष्ठपैंक लाई ब्याकलिंक स्वचालन संग बढाउन प्रयास गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।. त्यसोभए, यहाँ कुन कुरालाई पहिलो र अग्रणी मानिन्छ:
मात्रामा अधिक मात्रामा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्
एसईओ रणनीतिहरूको शेरको अंश बनाउन अवधारणा मूल अवधारणा मात्र गुणवत्तामा बेल्ट गर्दैछ।. बस राख्नुहोस्, एसईओको विश्वव्यापी उद्देश्य SERPs मा अनलाइन पदोन्नतिको लागि एक स्थिर र लामो समयसम्मको परिणाम प्राप्त गर्न हो. दुर्भाग्यवश, धेरै ब्लगरहरू र नौकास वेबमास्टरहरू लिङ्कहरू निर्माण गर्न एक मानक समस्याको सामना गरिरहेका छन्. म धेरै पटक मतलब छ कि उनि प्राथमिकता को लागि प्राथमिकता दिछन, एक हानिकारक आशा मा छ कि वहाँ फिर्ता पछाडि को एक विशाल पैक छोडने उनको वहाँ को समग्र रैंकिंग बढ्छ. तर तिनीहरू धेरै गलत छन् किनकी कम-गुणस्तर वा अप्रासंगिक लिङ्कहरू एसईओ उद्देश्यका लागि मात्र बेकार हुँदैन. वास्तवमा प्रगतिको सट्टा त्यहाँ आफैलाई एक गंभीर रैंकिंग काराई कमाउने उच्च संभावनाहरू छन्. सबैभन्दा खराब अवस्थामा परिस्थितिमा, सबैले साथसाथै खोजीमा स्थायी प्रतिबंधको साथ समाप्त हुन सक्दछ.
तपाईंको निको वा व्यापार उद्योग भित्र लिङ्क
यो भयानक गल्ती कहिल्यै नदिनुहोस्, किनकी मैले धेरै वर्ष पहिले पार गरेको थिएँ. वास्तवमा, म मेरो ब्लगमा ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्ने गलत तरिकामा जान्थे - केवल मेरो प्रतीकात्मक भरोसेमंद वेबसाइटमा लिङ्क गरेर मैले काम गर्न लायक. यसो गर्दा, मेरो भर्खरै सिर्जना गरिएका ब्याकलिंकहरूमध्ये अधिकांश शुद्ध रूपमा प्रासंगिक हुन सकेन - टाढाको सबै टाढाको ठाउँमा भित्रिएको थिएन. नतीजाको रूपमा, मैले धेरै समय र प्रयासहरू बर्बाद गरेको छु - केवल पेजरङ्कमा ब्याकलिङ्कहरूबाट निराश हुन निराश हुन सक्छ।. यसैले टिप्पणी र विषय छलफलमा संलग्न गर्नु अघि, म दृढतापूर्वक सिफारिस गर्दछु कि दुई पटक जाँच्नुहोस् कि लक्षित स्रोतहरू तपाईको आलामा समर्पित हुन्छन् वा एउटै व्यापार उद्योग भित्रै बस्नुहोस्।.
हैंडल किवर्ड खोज अनुसन्धान को लागी कुशल लंगर
राम्रो तरिकाले, यो सामाग्री भन्न को लागी कुनै राजा छैन. एसईओ को बारे मा सबै सचमुच खोजशब्दों को सही चयन को आसपास र एक उचित सेमिनार विश्लेषण को आसपास छ. त्यसैले तपाईंको ब्याकलिङ्कलाई तपाइँको वेबसाइटको प्रोफाइलमा राख्दछ, वा अझ सटीक हुनको लागी पाठ लंगर छ. दुर्भाग्यवश, गहिराई खोजशब्द अनुसन्धान को लागी एक नै दृष्टिकोण धेरै पटक उपेक्षा गरिएको छ. यही कारणले तपाईंको लिङ्क एंकर सम्भवतः सावधानीपूर्वक लिखित रूपमा - कम से कम एडवर्ड्स वा अन्य परिष्कृत खोजशब्द अनुसन्धान उपकरणहरू प्रयोग गर्दै।. यस तरिका, तपाईले खोजीमा यसको लोकप्रियताको कमीको कारण गलत लिङ्क विरुद्ध आश्वासन पाउनुहुनेछ. बस सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं अप-टु-अप गर्दै हुनुहुन्छ र सबै प्रमुख खोज प्रवृति र अर्का अनियमितताहरूको पालना गर्नुहोस्. सम्झनुहोस्, दुई जस्तो समान एंकर पाठहरूले बिल्कुल असामान्य ट्राफिक-उत्पन्न क्षमतासँग लिङ्क आपूर्ति गर्न सक्छ, र यसैले स्थायी रूपमा पृष्ठपैंकलाई प्रभाव पार्छ।.